Kaabta iyo Soo Celinta Samsung Galaxy S3 Si fudud
> Resource > Samsung > kaabta iyo Soo Celinta Samsung Galaxy S3
Hey qof kasta, aan Galaxy S3 Samsung dhowr maalmood ka hor waxaan ka helay oo qalad ayaan sameeyey, waxaan soo bixi launcher tago oo aan telefoonka aan sida wanaagsan iyo sida siman sida ay yeeleen bilowgii oo ka shaqeeya bilaabay, si aan u tirtiro oo hadda Waxaan dareensanahay phone aan shaqaynayn iyo sidoo kale waxa ay sameeyeen, sidaas darteed waxaan jeclaan lahaa in gurmad info oo dhan, dib telefoonka ka dibna dib ugu soo celin info oo dhan. Ma waxaad u malaynaysaa in aan u sameeyo (haddii ay jawaabta haa tahay, fadlan ii sheeg sida loo sameeyo)?
Damacsan tahay in ay gurmad ku jira oo dhan ee ku saabsan Samsung Galaxy S3 in PC ka cabsi qaba in aad iyaga lumin ka mid ah taxaddar la'aan? Waa hagaag, waa wax fiican in ay qaadaan tallaabooyinka ka hor. Laakiin, samaynaya gurmad Galaxy S3 oo soo celin ma aha bey u fududayd. Waxaad u baahan tahay qalab dhinac saddexaad si ay kuu caawiyaan. Bal eeg halkan: Wondershare MobileGo for Android (Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Tababaraha Tani Android aad u saamaxaaya in ay gurmad iyo soo celinta xiriirada, barnaamijyadooda, abuse wac, SMS iyo dheeraad ah ee aad Samsung Galaxy S3.
Download version maxkamad si xor ah u gurmad iyo soo celinta Samsung S3.
Dooro version saxda ah sida ay xaaladdaada. In hage hoos ku siin, waxaan jeclaan lahaa in ay diiradda saaraan version Windows ah.
Fiiro gaar ah: The version daaqadaha siinayaa fursad ay ku raad raac aad iyo soo celinta xog dheeraad ah oo ku saabsan Samsung Galaxy S3 badan version Mac ma.
Sidee loo soo celin gurmad iyo Samsung Galaxy S3
Bilowga aad, abuurtaan MobileGo for Android inay soo qaadaan suuqa kala xiriir.
Tallaabada 1. Ka Samsung Galaxy S3 ku xiran PC
Dadka isticmaala Windows isticmaali kartaa cable USB ama WiFi in ay ku xidhmaan Samsung Galaxy S3 in kombiyuutarka. Sida dadka isticmaala Mac, waxaad samayn kartaa xidhiidhka ka via cable USB ah.
In dhowr ilbiriqsi, aad Samsung Galaxy S3 la ogaan doonaa ka dibna soo bandhigay suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. waxyaabaha kaabta on Samsung Galaxy S3
In uu furmo suuqa hoose, guji "kaabta One-Click". In gurmad suuqa kala pop-up ka, ku jira oo dhan waa la saxay. Waxay tahay xiriirada, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, jadwalka, playlists info, barnaamijyadooda, music, videos iyo sawiro. Uncheck aad xogta la rabin marka aad go'aansato oo keliya in ay gurmad qaar iyaga ka mid ah.
By default, file gurmad badbaadi doona in D: \_ Documents \_ Wondershare \_ MobileGo \_ kaabta \_ Nancy ayaa Samsung_20130719180114. Waxa kale oo aad dooran kartaa kale badbaadiyo Jidka adigoo gujinaya "Browse" Ka dib markii in, guji "Back up".
Tallaabada 3. Soo Celinta xog ku saabsan Samsung Galaxy S3
In galeeysid bidix, guji "Tookit". Markaas riix "Soo Celinta" daaqada tookit ah. Oo dhan files gurmad aad samaysay MobileGo for Android la la soo bandhigi doonaa furmo soo celiyo. Dooro mid ka mid ah oo guji "Soo Celinta".
Video wuxuu kuu sheegayaa sida loo raad raac ah iyo soo celinta Galaxy S3
Taasi waa dhan oo ku saabsan sida loo raad raac iyo soo celinta Galaxy S3. Iyadoo MobileGo for Android, marna ma u baahan tahay inaad ka welwelina badiyay xogta ku saabsan Samsung Galaxy S3.